Turkey oo masaafurineysa 7 qof oo Syrian ah oo ujeedo yaab leh u cunay moos - Caasimada Online
Home Dunida Turkey oo masaafurineysa 7 qof oo Syrian ah oo ujeedo yaab leh...
Turkey oo masaafurineysa 7 qof oo Syrian ah oo ujeedo yaab leh u cunay moos
Ankara (Caasimada Online) – Turkey ayaa Khamiistii ku dhowaaqday inay xirtay oo ay qorsheyneyso inay dalkeeda ka ceyriso toddoba qof oo muhaajiriin Suuriyaan ah, oo baraha bulshada soo dhigay muuqaallo muujinaya ayaga oo cunaya moos.
Laanta socdaalka Turkey ayaa sheegtay in muuqaallada ay dadkaas soo dhigeen baraha bulshada ay ahaayeen “daandaansi” loogu jees-jeesay shacabka Turkey oo in badan oo ka mid ah ay hadda haysato xaalad dhaqaale xumo.
Laanta socdaalka ayaa sheegtay in toddobaad qof la xiray, oo loo masaafurin doono Syria.
Dhacdadan ayaa muujineysa sare u kaca dareen ka dhan ah muhaajiriinta oo ka jira Turkey, ayada oo dhaqaalaha dalka uu u xumaaday sababo la xiriira sicir-barar iyo qiimaha lacagta Lira ee dalkaas oo hoos u dhacday.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkey ay hadda xarun u tahay shan milyan oo qaxooti iyo muhaajiriin ah, kuwaas oo badankood ka yimid dalka ay dagaallada halakeeyeen ee Syria.
Fadeexadda ku saabsan mooska ayaa billaabatay markii video uu qabsaday baraha bulshada horraantii toddobaadkan, ayada oo uu muujiyey nin ku sugan Istanbul oo ku qeylinaya gabar Syrian ah, kuna eedeynaya muhaajiririinta “waxada haysataan nolol middeena ka fudud.”
“Nolol raaxo leh ayaad ku nooshihiin, anagana ma cuni karno xitaa moos, adinkana ayaga oo kiilooyin ah ayaad suuqa kasoo iibsaneysaan,” ayuu yiri ninka ayada oo kadibna dad careysan ay isku hareereeyeen gabadha
Qaar ka mid ah dadka Syrian-ka ah ee jooga Turkey ayaa kadib billaabay dhaq-dhaqaaq ay uga soo horjeedaan takoorka, ayaga oo baraha bulshada soo dhigay muuqaallo muujinaya ayaga oo cunaya moos.